Sheeko Caruureed Dadqalatadii Dhagdheer - iftineducation.com
aadan21 / January 1, 2012
Bari waxa Jiray reer reermiyi ah oo lahaa afar caruur ah oo walaalo ah oo kala bah ah. Labana fariido ayey ahaayeen, labana nacasyo.
Maalin maalmaa ka mid ah ayaa hooyadii labada fariidada ah dhashay waxay u dhigtay ninkeedii oo safar ku maqnaa caano ay ka listay naaskeeda iyo kuwo riyaad oo ay iskudartay ayadoo xiligunna yahay Jiilaal.
Markii uu yimid ayuu yidhi, “Caanahan xagaad ka keentay illayn waa Jiilaalle?”
Hadaad caruurta habaabisid, markasta caano ayaad heli”, gabadhi tidhi.
Subaxiidanbe ayuu caruurtii iyo awrkii kaxeeyay oo ku yidhi, “Midhaynu soo guranaynaaye inna keena”.
Way fogaadeen oo wuxu geeyey meeshii midhaha laga soo gurayey. Wuxu yidhi “Inoo gura midhaha waan seexanayaaye. “Geed hoostiis ayuu ku goglay go`iisii cadaa, koortii awrkana wuxu sudhay geed si dabayshu u ruxdo oo caruurtu istidhaahdo aabihhiin iyo awrkiiba way joogaan. Mar casarkii ahayd ayey isyidhaahdeen aabihiin soo toosiya, dabadeed way ka waayeen oo go’ qudha ayey ku arkeen meeshii iyo koortii geedka sudhnayd. Way iska socdeen, waxaanay la kulmen guri Jees ah. Dabadeed way gallen, Waxay uugu tageen gabadh ku tidhi waxan ahay inna “Dhagdheer”, gurigana hooyaday ayaa leh.
“BIyo nasii”, ayay caruurtii tidhi.
“Haantaa waxa la yidhaahdaa-Bowdheer-, markaa hooyaday ayaa maqlaysee hadaad kor ka furtaan waayo sanqadh dheer ayay bixisaa. Markaa mudac ku muda, dabadeed halkaa ka cabba. Markay cabbeen waxay yidhaahdeen “meel naseexi”.
“Hooyaday waa dad qalato markaa harrar ayaan idinku duubayaa oo aqalka dabadiisa ayaan idinku qarinayaa”. ayay gabadhi uugu Jawaabtay.
“Dhagdheer kolkay timid way urisay caruurtii.
Naas gabdheed ayaa uraya”. ayay tidhi dhagdheer.
“Hooyo waa naaskayga “, ayay tidhi inantii.
Markii ay dhagdheer erayadii ku celcelisay ayey cabsootay gabadhi:”Hooyo caruurta waan soo saarayaaye ha cunin”.
Caruurtii ayey soo saartay, habeenkiina dadqalatadii way barisay. Subaxnimadii markay ahayd ayey tidhi dhagdheer, “Yaan u xiiraa inankooda?”
Nacastiiba tidhi “Inankayaga u xiir”.
“Hablaha! midayna xaabo doon, midayna biyo doon”,
“Inankayagu biyaha ayuu ila doonayaa, fariidii ayaa tidhi. Waanu raacay. Nacastiina kaligeed ayey xaabadii doontay oo inankoodii way qalatay. Iyana markay timid ayey cuntay.
“Masow meel no bannee cadow ayaa na eryanayee”. ayey caruurtii waydiisteen.
“Hadaydaan ciid iyo saxarnna igu duulinayn iga talaabsada”. ayuu maskii ku celiyey.
“Dhagdheer dhimatoo dhulkii nabadee”
“dadoo ma isu soo dhawaanaa?”
W?Q: Aadan Abdi
Kunciil oo ka yaabsaday fanaaniinta cusub + Daawo Video